TAARIIKHDA MAANTA: | DAABACADA WARKA: Nov 5, 2002
·Ciidamada cadawga Itoobiya oo wali sii wada Xayiraadii Xuduuda Soomaaliya iyo Boobkii hantida Dadwaynaha.
·Xubin ka tirsan Baar lamaanka Maraykanka oo Baadhitaan Dhinaca Xuuquuqul Insaanka u tagtay Itoobiya.
·Ciidamada Dawlada Itoobiya oo dilay 38 dumar u dhashay qoomiyadda Canfarta.
·Xubno laga saaray Golaha Dhexe ee Xisbiga SEPDF ee Qoomiyada Siidaamaha.
·Barnaamuj Balaadhan oo loogu magac daray Habeenkii Deeqda Halganka Soomaalida Ogaadeenya ayaa ka dhacay gobalka Minnnesota USA.
Ciidamada cadawga Itoobiya oo wali sii wada Xayiraadii Xuduuda Soomaaliya iyo Boobkii hantida Dadwaynaha.
Ma aha markii ugu horeeysay ee ay isku dayaan Ciidamada Nacabka Itoobiya in ay xayiraan Ganacsiga u dhaxeeya Shacabka Ogaadenya iyo Soomaaliya.
Laga bilaabo 10 Oktober waxay Ciidamada Gumaysigu bilaabeen in ay xayiraan wadooyinka isku xidha Soomaaliya iyo Ogaadenya, Koonfur ila Waqooyi.
Xidhitaanka wadooyinkan ayaa ujeedada ka danbaysa ay tahay in lagu xayiro Ganacsiga u dhaxeeya Shacabka Ogaadenya iyo midka Soomaaliya, intii uu socday Ololahan Xuduuda lagu xanibayo waxay Ciidamada Cadawgu Gacanta ku dhigeen 96 Baabuur oo Badeeco u kala waday Labada dhinac. Hawlgalkaas waxay Ciidamada Cadawgu ku dileen 20 Ruux oo Ganacsatadii Gaadiidkaas wadatay ah 40 kalana way ku dhaawaceen.
Dhacaas iyo dilkaas loo gaystay Ganacsatada waxay keneen in qaar ka mid ah Ganacsatada ay iska difacan boobka Ciidamada cadawga Itoobiya.
Iska hor,imaadyadii ugu waayeeynaana waxay ka dhaceen Harta-Sheekh iyo wajaale. Waxaana Ciidamada Cadawga lagaga dilay Ololaahs bahlanimada ah ee ay kula kaceen ganacsatada 4 Askari 10 kalana waa lagaga dhaawacay.
Dhacdadani waxay si aad ah u saamaysay Gobalad Shiniile iyo Jigjiga, waxayna shacbigii daganaa deeganadaas ku abuurtay dareen siyaado ah iyo necbaansho Gumaysiga Itoobiya.
Dhinaca kale Sidii caadada u ahayd gumeysiga wuxuu sii xoojiyay falalkiisii naxariis darada ahaa ee dil, dhac, xadhig iyo boob hantida Shacbiga Ogadeenya ee aan waxba galabsan:
5/10/02, Degmada Galalshe oo ka tirsan Gobolka Nogbeed, wuxay Ciidamada cadowgu ku dileen:
Ahmed Shekh Mohamed Cabdille.
29/10/02, Garbo wuxey Ciidamada cadawga Itoobiya ku dileen:
Samiira Cabdi Malow.
31/10/02, waxay Ciidamada Cadawga Itoobiya Boobeen Xoolo Nool oo badan oo isugu jira Geel, Lo iyo Adhi.
Toban Qoos oo daganaa degaanka fiiq ayeey Ciidamada Itoobiya ka moora duugeen waxay Xoolo haysteen waxaana ka mid ahaa Xoolaha ay ka dhaceen 100 Neef oo Geela, 400 oo Lo ah iyo 1000 Neef oo Adhi ah.
Ilaa iyo hada ma cado Sababta ay Ciidamadasi falkaas. u gaysteen balse dadku waxay ku sheegayaan fasax loo siiyay Ciidamada Cadawga in ay shacabka ku boobaan si loo nugleeyo..
Qoysaskaa laga moora duugay waxay hanti haysteen ayaa lagu soo warabayaa in xaladooda Nololeed ay aad khatar ugu jirto, Gaar ahaan Caruurta iyo Dadka waayeelka ah ee tabarta daran
Sida oo kale waxay Ciidamada cadawgu ka boobeen hanti ay ku sheegeen Ganaax aan ilaa hada lagaran ujeedadiisa dadkan.
1-Cali Ismacil Shiil, 4 Riti.
2-Mohamed Cali Sh. Cabdi, 3/Rati
3-Ahmed Yuusuf Cali, 2000/ oo Bir.
4-Cumar Lacag, oo ah nin aad caan ugu ah D/Buur, waxaa laga dhacay, 50/neef oo Lo ah.
5-Aaden Xarbi waxaa laga dhacay 20/ neef oo Lo,ah
6-Mohamed Ismacil Shil, 5/ Riti.
Ciidamada nacabka Gumaysiga Itoobiya waxay Gobalka Baali ku Xidh xidheen dadkan shabaka ah ee aan waxba galabsan, kuwaas oo u badnaa ganacsato Muruq maal ah.
1-Macallin aw Maxamuud Xussein.
2-Ibrahim Cabdullahi Muraad.
3-Cabdullaahi Dahir Macallin Mukhtaar.
4-Ahmed Mohamed Cabdi
5-Mohamed Cabdulaahi Cumar-gurey.
6-Sonkor Jeele Weyrax.
7-Yuusuf (oon magic buuxa laga haynin).
Dadkaas waxaa loo qaaday magaala madaxda Gobolka Baali ee Gooba.
28/10/02,waxay Ciidamada cadawgu magaalada Qabri-dahare waxay ku xidh xidheen. Mohamed Carte Cadhays.
2-Ruqiya Muxumed Dahir.
26/10/02, Degmada Dhanaan oo ay Horay ugu Xidheen Ciidamada cadawga Itoobiya dad gaadhaya 50 Ruux, isla markaasna ay Bandaw ku soo rogeen ayeey dadkii horay ugu xidhnaa, ku dareen.
1-Shekh Faarax Sh. Xabiib.
21/10/02, D/Buur, waxaa lagu xidhay:
1-Ardo Alaaki, oo marar horena la xidhay iyada oo lagu tumi in ay taageere u tahay jwxo iyo
2-Malko Aaden Carab.
Xubin ka tirsan Baar lamaanka Maraykanka oo Baadhitaan Dhinaca Xuuquuqul Insaanka u tagtay Itoobiya.
Haweeyneeyda la yiraahdo Sintiya Makinay oo ka tirsan guddiga xuquuqal aadanaha ee barlamaanka dalka mareykanka ayaa todobaadkii hore socdaal ku tagtay dalka Itoobiya. Socdaalka haweeyneydaas ayaa ku wajehnaa baadhitaan ay ku samaynayso dhinaca xuquuqal insaanka shacabka Itoobiya.
Sida wararka sheegayaan, Xildhibaan Sintiya ayaa la kulanta Melez Zenaawi iyada oo ku xoojisay in mareykanka u ka xumaaday xasuuqii ka dhacay magaalada Awaasa iyo xadgudubyo kale ay dowladdu ku hayso shacbiga rayidka ah, gaar ahaan xasuuqa lagu hayo shacbiga oromada, soomaalida Ogadenya iyo sidaamaha
Ciidamada Dawlada Itoobiya oo dilay 38 dumar u dhashay qoomiyadda Canfarta.
Wararka naga soo gaadhaya Gobolka Canfarata ayaa sheegaya in maalintii Talaadada ee bisha Oktober 31, 20002 ay Ciidamada Dawlada Itooobiya ee Tigreegu horseedka u yhiin dileen 38 dumar ah oo dhashay qoomiyadda Canfarata.
Dilkaas oo ka dhacay Tuulada SEMU oo u dhaw magaalada SHEWAROBIT oo 280 KM ka xigta dhinaca Waqooyi magaalada Addis Aaba.
Dumarkan oo ka soo noqdey hawl maalmeed ay u tageen suuq ku yaala Tuulada SEMU ayaa 32 ka mid ah Ciidamada Wayaanuhu ku toogteen isku meel, 6 kale oo dumakaas ka mid ah ayaa iyana isla aagaas meel aan ka fogeyn ay ku toogteen Ciidamada hamuumyeysan ee Taliska Addis Ababa.
Dadka siyaasadda Meles ku xeel dheer ayaa arintan ku tilmaamey mid uu ku doonayo in uu iskaga hor keeno qoomiyadda Canfarta iyo kuwa Amxaarada oo aaga dilkaasi ka dhacay xuduud wadaag ka ah.
Warar kale ayaa iyaguna waxa ay tibaaxayaan in dilka Dumarkan aan waxaba galabsan uu yahay aargoosi ay Ciidamada Wayaanuhu kaga aargoosanayaan dagaaladii dhawaan ay Jabahadda Xoreynta Canfartu ku soo cusbooneysiisay Ciidamada Cagajiidka ah ee Melez Zenawi ka amar qaata.
Xubno laga saaray Golaha Dhexe ee Xisbiga SEPDF ee Qoomiyada Siidaamaha.
Dowladda Itoobiya ayaa 29kii bisha Oktoobar ku dhawaaqday in 44 Xubnood oo ka tirsanaa Golaha Dhexe SEPDF in laga qaaday xubinimadoodii. Tilaabadan ayaa timid wax yar ka dib markii xubno gaaraya ilaa 41 todobaadyadii la soo dhaafay iyagana laga saaray Golaha Dhexe ee Xisbiga.
Guud ahaan waxaa ilaa hada Golaha Dhexe Xisbiga SEPDF oo ah xisbiga ay TPLFdu u sameeysay qowmiyadda Sidaamaha laga saaray ilaa 85 xubnood.
Wararku waxay intaas ku darayaan in sarakiil tigree ah oo ka socdo wasaarada federaaliga Itoobiya ay haatan ku sugan yihiin magaalada Awassa, saraakiishan ayaa lasheegayaa in ay Dib uhabeen balaadhan ku sameeynayaan kilil ku sheega qowmiyada Sidaamaha..
Dib u habeeyntan ka socoto xisbiga SEPDF ayaa timid ka dib markii lagu tuhmay in xubno aad u badan oo ka tirsan xisbigaas ay si hoose ula shaqeeyaan Jabhadda Xoreynta Sidaamaha.
wararku waxay intaasi ku darayaan in xubno ka tiresan Golaha dhexe ee SEPDF oo aan ilaa iyo hada laxaqiijin karin tiradoda ay ka mid yihiin Jabhadda Xoreynta Sidaamaha SLF.
Barnaamuj Balaadhan oo loogu magac daray Habeenkii Deeqda Halganka Soomaalida Ogaadeenya ayaa ka dhacay gobalka Minnnesota USA.
Barnaamij aad loo soo abaabulay oo isugu jira Riwaayad ay dhigeen Qaar ka mida Hobolada Waaberi, warbixino ay soo jeediyeen Caruur reer Ogaadeenya ah oo ku nool Minnesota, iyo dad aqoon yahano Maraykan ah ayaa ka dhacay Magaalada Minneapolis Tiyaatarka wayn ee Sabathani community Center 2dii bishan Noveember oo ahayd habeenki Sabtida ahayd. Waxaa ka soo qayb galay Barnaamijkan iyo Riwaayadaba dad gaadhaya 1,500 oo ruux iyadoo dad boqolaal gaadhaya ay guryahoodu dib ugu noqdeen markii Tiyaaturku uu buux dhaafay.
Caruurta halkaas warbixinaha ka soo jeediyey oo labisnaa Labis gaara oo ay Halkudhagyo ku qoraayeen Calanka Ogaadeenya ku Sawiraa ayaa dhaqaajiyay dareenkii dadwaynahii Barnamijkaaa kasoo qaybgalay.
1. Hodan Cabdullaahi oo ah gabadh 14 jir ah ayaa warbixin guud oo Taariikhda Ogaadeenya iyo dhibaatada Guumaysiga Xabashidu ku ahayso Shacbiga Ogaadeenya ka soo jeedisay dadwaynaha Hortiisa. Warbixin dheer oo ay Hodan kaga hadashay ku tumashada Xuquuqda shacbiga Soomaaliyeed ee Ogaadeenya iyo Marxaladda adag ee ay Ogaadeenya ku sugun tahay ayaa dadki goobta joogay ay aad ugu riyaaqeen
2. Xirsi Axmed iyo Xirsi Maxamed oo ah Laba wiil oo 10 jira ah oo reer Ogaadeenya ah ayaa iyana si talan taala ah midba mar u qabsanayey hadalka, iyaga oo ka hadlay dhibaatada uu Guumaysiga Itoobiya ku hayo dadka iyo dhulka Ogaadeenya, gaar ahaan waxay xuseen dhibaatada ay ku sugantahay Caruurta Ogaadeenya. Waxay ka hadleen Kharyraadka isugu jira Xoolo, Beero, iyo Batrool ee Eebbe ku manaystay Dhulka Ogaadeenya iyo sida ay Caruurtii Ogaadeenya ugu suguntahay, Gaajo, Waxbarasho la'aan, Cudur, iyo Nabadgaliyo la'aan intaba. Dadki Tiyaatarka fadhiyey ayaa Ilmo ay indhahooda buuxisay waxayna isku dareen Sacab iyo Istaag kadib hadalki Qiirada lahaa ee ay Wiilashu soo jeediyeen.
3. Sidoo kale Nimco Cabdi Cali iyo Idil Cabdullaahi Ducaalle oo ah laba gabdhood 15 jiro ayaa u kala hadlay Gabdhaha Ogaadeenya iyo Hooyooyinka Ogaadeenya. Waxay ka hadleen dhibaatada uu ku hayo Guumaysiga Itoobiya Gabdhaha iyo Hooyooyinka Ogaadeenya. Waxay ka warbixyeen Xaalladda dhabta ah ee ka jirta Ogaadeenya ee isugu jirta Kufsiga, Dilka, Dhaca, Xadhiga, iyo Argagax galita ay Ciidamada Itoobiya ku hayaan, taas oo ay Nimco iyo Idil ku sheegeen mid maalin walba uu Shacbigu ku waabariisto.
Waxaa sidoo kale ka hadlay Qadiyada Ogaadeenya Deeq Dhaqaalena ku deeqay Saddex nin oo Qareena Maraykan ah.
Ugu dambaynti Waxay ahayd Habeen Taarikhda Halganka Ogaadeenya Baal Dahabi ah ka Galay oon marnaba la iloobi karin, dadwaynihii Halkaas yimidna uu ku diirsaday.